Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. पाकिस्तानले किन खोज्यो नेपालको साथ ? – Emountain TV
पाकिस्तानले किन खोज्यो नेपालको साथ ?
काठमाडौँ, २४ फागुन । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा तीनै तहको निर्वाचनपछि बनेको सरकारको पहिलो पाहुना बने पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहिद खकान अब्बासी । संयोग नै होला, प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक संसद् भवनमा चलिरहँदा राजनीतिक अस्थिरताले जेलिएको र ‘आतंकवाद एवं उग्रवाद’ सँग जुधिरहेको मुलुकका कार्यकारी प्रमुख नेपाल ओर्लिए ।
दस वर्षे माओवादी विद्रोह र लामो राजनीतिक उतारचढावपछि स्थायित्वतर्फ उन्मुख रहेको भन्दै अब्बासी नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना दिन अचानक काठमाडौं ओर्लिए । भ्रमणको कुनै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थिएन । केपी ओली प्रधानमन्त्री चयन हुनेबित्तिकै शुभकामना सन्देश दिएसँगै उनले भेटेर खुसी साट्ने इच्छा व्यक्त गरे । उनको इच्छालाई प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकार गरे । सम्बन्धित निकायले त्यसमा अडेर आफ्नो काम अघि बढाए ।
जसले गर्दा २४ वर्षपछि नेपालमा पाकिस्तानका तर्फबाट दुईपक्षीय भ्रमण भयो । हुन त यसबीच सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन या भुटान जाँदा ट्रान्जिटमा उच्चस्तरको भ्रमण भने भएका थिए । अहिलेको भ्रमणलाई सद्भावना भ्रमणभन्दा माथिल्लो भनिएको छ ।
१९ घण्टा काठमाडौंमा रहँदा अब्बासीले आफ्नो चासो र सन्देश स्पष्ट मात्र पारेनन्, क्षेत्रीय सन्तुलनको खाकासमेत प्रस्तुत गरे । यद्यपि उनी आउने दिनसम्म पनि उनको भ्रमण किन र केका लागि भन्ने स्पष्ट थिएन । उनको छलफल र प्रस्तुतिले भने भ्रमणको औचित्य लुकिरहन सकेन ।, यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।